COPAC Inotanga Zvakare Chirongwa Chayo
Chikunguru 19, 2010
Chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika chatanga zvakare neMuvhuro mumativi mana enyika. Chirongwa ichi chakambomiswa kwesvondo rimwe chete, kuitira kuti nhengo dzeparamende dzimbodzokera kudare kunoita basa, uye kunzwa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vachivhura chikamu chechitatu cheparamende yechinomwe.
Munguva iyi ndipowo gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vakatura kudare reparamende hurongwa hwepakati pegore hwemashandisirwo emari nemapazi ehurumende.
Mumwe wemasachigaro ekomiti yeparamende iri kutungamira hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, VaDouglas Mwonzora, vanoti zvinhu zvatanga zvakanaka mumatunhu akawanda munyika.
VaMwonzora vanoti nguva yavakawana yekuzorora kwesvondo rimwe chete, yakavapa mukana wekugadzirisa zvinhu zvizhinji zvaida kukanganisa hurongwa uhu. Zvinhu izvi zvinosanganisira michina yekutapa manzwi, pamwe nekuturikirwa mururimi rweShona, Ndebele nemimwe mitauro kwemagwaro ari kushandiswa mukunzwa pfungwa dzevanhu.
Mumwe wevari kutungamira hurongwa uhu kuMidlands, VaAmos Chibaya, vanoti zvinhu zvatanga zvakanaka mudunhu ravari kutungamira.
Vanoona nezvezvirongwa musangano reZimRights, Amai Olivia Gumbo, vanoti mashoko ari kubva kumatunhu eMashonaland West neMashonaland East anoti vanhu vava kunzwisisa mibvunzo yakagadziriswa.
Hurukuro naAmai Olivia Gumbo